Sancada Xirashada Ilkaha Oo Noqotay Adeegga Ugu Qaalisan Ee Xurumaha Lagu Daweeyo Ilkaha
Magaalada muqdisho waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku soo batay goobo lagu daweeyo ilkaha, marka aad maraso waddooyinka caasimadda waxa ay indhahaagu qabanayaan boorar lagu sawiray ilko qurux badan oo soo jiidanaya indhaha qofka.
Xarumahan ilkaha lagu qurxiyo waxaa loo furay ganacsi ahaan waxaana meela qaar ka howl gala dhaqaatiir ajnabi ah iyadoo ay jiraan dhalinyaro dibadda wax ku soo bartay oo iyana daah furay xarumahaan si ay dadka uga baahi tiraan in ay u baahdaan adeeg dibadda ah.
Sanado ka hor adeegyada ay bixiyaan goobaha lagu daweeyo ilkaha waxay ku koobnaayeen oo kaliya bixinta, galidda iyo daaweynta ilkaha, balse hadda waxaa lagu soo daray dhaqidda/nadiifinta iyo xirashada ilkaha oo dalka aan laga heli jirin, waxa ayna dadku ku qasbanaayeen in ay dalka dibadiisa aadaan si ay u helaan adeegaas, taasi oo keeni jirtay inuu kaga baxo waqti iyo qarash badan .
Sancada xirashada ilkaha ayaa ka mid ah adeegyada aysan dadku ka heli jirin dalka gudihiisa, Hayeeshee, qaar kamid ah xarumaha daaweynta ilkaha ayaa dhowaan soo kordhiyay adeegyadaas.
Farsamada xirashada ilkaha waa mid kamid adeegyada ugu qaalisan oo ay bixiyaan xurumaha daaweynta iyo qurxinta ilkaha.
DhaqtarCabdiraxiin Maxamed Xasan, oo ah maamulaha Al Qudus Dental clinic ayaa sharaaxaya waxa ay qabtaan.
“Waxaan qabannaa adeegyo kala duwan sida buuxinta, bixinta, dhaqidda, dawaynta iyo toosinta ilkaha” ayuu yiri Dr C/Rixiin.
Sidoo kale waxa uu yiri “adeegan xirashada ilkaha waa mid ka mid ah adeegyada ugu badan ee aan hadda qabanno waana adeeg qaali ah badanaa dadku waxa ay xirtan ilkaha marka aysan sinneen oo ay kala dheeryihiin, dadka oo dhan isku waqti uma xirnaanayo qofba waa si”.
Adeegan oo aad qaali u ah dalkana ku cusub ayaa mar aan wax ka waydiinay qarashka ay ku qabtaan waxa uu yiri “qiimihiisa haddii aan ka hadalnana waa lacag dhan $900 oo dollar lkn Dadka qaarba sibay u bixiyaan, qaarbaa halmar wada shuba Dadna qeyb qeyb Bay u bixiyan”.
Xirashada ilkuhu waa adeeg ku cusub Magaalada Muqdisho, oo aan hore looga heli jirin dadka doonaya farsmadanna waxay u aadi jireen dalka dibadiisa.
Haddaba, maxay dadku u doorbidaan in ay xirtaan ilkaha? Markale waxaa ka jawaabaya Dr C/rixiin.
“dadku waxa ay u xirtan ilkaha in uu wanaagasanaado muuqaalka qofka gaar ahaan afka taa ayaa la dhihi karaa waa midda ugu wayn, tankale way jirtaa caafimad ahaan dad u xirta sida qof aysan ilkihiisu is qabsaneyn ama cuntadu ay ciridka kagaleyso oo kale” ayuu yiri Dr C/rixiin.
Inkastoo, qeybaha kala duwan ee bulshado ay ka faa’iideystaan adeeggan, haddana macaamiisha ugu badan adeegan waa dumarka sida uu ii uu ii xaqiijiyay Dhqatar Cabdiraxiin.
“Rag iyo dumar labaduba waa ay nooyimaadan lkn innagu intaan aragnay maacaamisha ugu badan ee timaadda waa dumar maxaa yeelay dumarku way ka jecelyihiin ragga marka laga hadlayo dhanka muuqaalka markaa taa ayaa keeneysa in dumarku ay u batan” ayuu raaciyay hadalkiisa.
Xafso oo kamid ah gabdhaha dhowaan xirtay ilkaha ayaan su’aalay sababta ay u xiratay iyo isbedelka ku yimid markii ay xiratay kadib.
“waxaa igu dhaliyey in aan ilkaha xirto ilkaheygu ma sinneen sidaas daraadeed ayaan u xirtay hadda waxan dareemayaa in ay xoogaa sidii hore kasoo simmeen inkastoo wali ay xiran yihiin haddana isbadal ayaan ka dareemayaa waxay ii xiran yihiin muddo ku dhow 6 Bil, xaqiiqdii lacagta aan ku xirtay waa ay badan tahay inkastoo aan qeyb qeyb u Dhiibo” ayay tiri Xafso.
Si kastaba, ha ahaatee, ilkuhu waxay qeyb weyn ku leyihiin quruxda qofka, waxana jira dad badan oo daneynaya bilicda iyo qurtixinta ilkahooda taasi ayaana keentay in Magaalada muqdisho ay ku soo bataan Xuramaha daaweynta iyo qurixinta ilkaha.